Global Voices teny Malagasy » Tsy ny filoha Jair Bolsonaro ihany no miaro ny fampiasana ny ankizy—mihevitra ireo Breziliana manankarena fa tsara ihany koa izany · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Aogositra 2019 7:26 GMT 1	 · Mpanoratra Global Voices Brazil Nandika Miranah
Sokajy: Amerika Latina, Brezila, Fanabeazana, Mediam-bahoaka, Politika, Sendikà, Tanora, Zon'olombelona
Niteraka adihevitra antserasera momba ny asan'ny ankizy tao amin'ny aterineto Breziliana ny fandaharana mivantana nataon'ny filoha Breziliana Jair Bolsonaro tamin'ny 4 Jolay . Manao fandaharana mivantana ao amin'ny fantsony media sosialy isaky ny Alakamisy i Bolsonaro hatramin'ny nandraisany ny asany tamin'ny Janoary 2019.
Milaza ny lalàna Breziliana  fa voaràra ho an'ny ankizy latsaky ny 13 taona ny endrika asa rehetra. Manomboka 14 taona, afaka miasa toy ny mianatra asa ny ankizy ary voaràra ny asa alina sy ny asa mampidi-doza. Ireo zatovo mihoatra ny 16 taona ihany no afaka manasonia fifanarahana.
Nitantara ny traikefany manokana tamin'izy ankizy niasa ilay mpitsara federaly Marcelo Bretas, izay miasa ao amin'ny fanasana fiara  ao Rio de Janeiro, sady voalaza fa mpanohana an'i Bolsonaro, tao amin'ny valim-panontaniana tamin'ny resadresaka natomboky ny zanakalahin'ny filoha, depiote federaly Eduardo Bolsonaro :
Tamin'izaho 12 taona, zatra nanamboatra brigadeiro [desera Breziliana ] sy nivarotra izany tany am-pianarako aho. Ny tena nahaliana dia tsy nila izany aho, saingy nahafinaritra ahy ny nandoa ny fianarako tennis avy amin'izany vola izany. Nahatsiaro tia mamorona sy tia mamokatra aho.
Mazava ho azy fa tsy mitovy amin'ny famaritan'ny Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny asa – International Labour Organization (ILO)  [na OIT amin'ny teny frantsay] ny “fampiasana ankizy” izany. Araka ny voalazan'ny ILO (OIT), ny fampiasana ankizy dia asa “manaisotra ny fahazazan'ny ankizy, ny mety ho zava-bitan'izy ireo, sy ny fahamendrehan'izy ireo, ary mampidi-doza amin'ny fivoarana ara-batana sy ara-tsaina. “Nampiany ihany koa fa manondro izay asa “manelingelina ny fianaran'izy ireo” ny fampiasana ankizy.”
Milaza ny Ivon-toerana Breziliana momba ny Jeografia sy ny Antontanisa  (IBGE) fa ankizy sy zatovo eo amin'ny 2,5 tapitrisa eo anelanelan'ny 5 ka hatramin'ny 17 taona ankehitriny no miasa ao amin'ny firenena. Milaza ny Biraon'ny Fampanoavam-panjakana fa maharay fitarainana eo amin'ny 43.000  mifandraika amin'ny fampiasana ankizy isa-taona eo izy.
Avy amin'ny tsy fahampian'ny fahalalana momba ny voka-dratsiny ny hevi-dison'ny fampiasana ankizy nozarain'ny ampahany lehibe ao amin'ny fiarahamonina breziliana, hoy ilay mpampanoa lalàna Patrícia Sanfelici, izay miasa amin'ny lalàna momba ny asa, tamin'ny resadresaka nifanaovana tamin'ny fampahalalam-baovao UOL . Sanfelici no mandrindra ny vondron'asa ao amin'ny biraon'ny mpampanoa lalàna izay miady amin'ny fampiasana sy ny fitrandrahana ireo ankizy sy ny tanora. Hoy izy:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/08/22/142019/
 4 Jolay: https://twitter.com/jairbolsonaro/status/1148333360848220160
 lalàna Breziliana: https://www.chegadetrabalhoinfantil.org.br/noticias/materias/o-que-o-eca-diz-sobre-o-trabalho-infantil/
 fanasana fiara: https://globalvoices.org/2019/07/03/interview-with-the-intercepts-leandro-demori-whose-team-of-reporters-challenged-brazils-anti-corruption-probe/
 desera Breziliana: https://en.wikipedia.org/wiki/Brigadeiro
 Fikambanana Iraisam-pirenena momba ny asa – International Labour Organization (ILO): https://libguides.ilo.org/child-labour-en
 Ivon-toerana Breziliana momba ny Jeografia sy ny Antontanisa: http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2019-06/mp-recebe-43-mil-denuncias-de-trabalho-infantil-por-ano
 mpahay toekarena Monica de Bolle : https://twitter.com/bollemdb/status/1148259626636468224
 fampahalalam-baovao UOL: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2019/07/06/fala-de-bolsonaro-sobre-trabalho-infantil-e-tudo-o-que-combatemos-diz-mpt.htm?cmpid=copiaecola